DEG-DEG: Ra’iisul Wasaaraha Lubnaan Oo is Casilay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Oct 29, 2019 1,078 0
Sacad Al-Xariiri oo ahaa ra’iisul wasaaraha Lubnaan ayaa ku dhawaaqay inuu is casilay, kadib banaanbaxyo mudooyinkii u dambeeyey ka socday wadankaas, kuwaas oo looga soo horjeedo madaxda wadanka iyo Siyaasiyiinta.
Shir Jaraa’id oo uu Al-Xariiri ku qabtay guriga uu ka deganyahay magaalada Beyruut oo ah caasimadda wadanka Lubnaan ayuu si cad ugu sheegay inuu gebi ahaanba is casiley, islamarkaana istiqaaladiisa u gudbin doono madaxweynaha wadanka Mishel Con.
Wuxuu sheegay ra’iisul wasaaraha iney kusoo xirmeen guud ahaan albaabadii ufurnaa, uuna ku guul dareystay inuu wadanka ka samata bixiyo xaaladda uu ka jiro, taasna ay ku qasabtay inuu is casilo.
Madaxweynaha wadanka Lubnaan Mishel Con ayaa isagana wuxuu sheegay inuu soo dhaweynayo is casilaada xukuumadda uu hogaaminayay Al-Xariiri, taas oo uu ku tilmaamay iney tahay fariin wanaagsan oo ku wajahan shacabka wadanka Lubnaan.
Is casilaada Al-Xariiri waxay timid 13 maalmood kadib oo xiriir ah oo ay banaanbaxyo ka socdaan guud ahaan wadanka Lubnaan, taas oo ay dadku ku dalbanayaan iney ka hor wareegaan siyaasiyiinta musuq maasuqa ku caan baxay, xukuumadana ay is casisho.
Lama oga in ra’yu caamka Lubnaan uu ku qanci doono is casilaada Al-Xariiri iyo inuu sii wadi doono banaanbaxyada looga soo horjeedo guud ahaan siyaasiyiinta wadanka Lubnaan iyo madaxda talada heysa.